Senate-ka Talyaaniga oo xasaanadii ka qaaday Matteo Salvini si uu u hortago maxkamad… – Hagaag.com
Senate-ka Talyaaniga oo xasaanadii ka qaaday Matteo Salvini si uu u hortago maxkamad…
Golaha Guurtida Talyaanigu waxay u codeeyeen Arbacadii in laga qaado xasaanadda baarlamaanka hogaamiyaha xisbiga midigta xagjirka ah Matteo Salvini, iyada oo loo diyaar garoobayo maxkamaddiisa oo ku saabsan eedeymo ah ku takri fal awoodeed intii uu ku sugnaa xafiiska Wasaaradda Arrimaha Gudaha.
Go’aanka Guurtida ayaa yimid ka dib markii dacwad laga keenay Salvini oo lagu soo eedeeyay ku takri fal awoodeed iyo ku haynta muhaajiriin markab gudihiisa muddo dhawr maalmood ah. Fadhiga waxaa qaadacay xubnaha xisbigiisa ee Golaha Senate-ka.
Fal celintiisii ​​ugu horreeysay ee go’aanka ayaa Salvini wuxuu sheegay inuusan ka walaacsanayn in laga qaado xasaanadiisa.
“Waan filayay taasi, waan ku faraxsanahay oo waan ku faanayaa wixii aan sameeyey, mar labaad ayaan sameyn doonaa mar alla markii aan ku soo noqdo dowlada.”
Waxaan u dhaartay dastuurka, kaas oo la filaya in qof walba oo Talyaani ah ilaaliyo dalka. Sidoo kale anigana waxaan difaacay Talyaaniga, “ayuu yiri.
Wuxuu ku daray “uma aadi doono hoolka maxkamada inaan is difaaco laakin inaan ku faano wixii aan qabtay”, wuxuu carabka ku dhuujiyey difaaca xuduudaha dalka markii uu ahaa wasiirka arrimaha gudaha waxay aheyd waajib.
“Ilmahaygu waxay xaq u leeyihiin inay ogaadaan sababta aabahood uga maqnaa guriga ma aysan ahayn inuu xiro dadka, laakiin difaaca xuduudaha dalka iyo amniga.” ” wuxuu ku daray “waxaa waajib ah ka guuleysiga mucaaradka inay ahaato sanduuqa codbixinta ee aysan noqon maxkamadaha.”
Waxaa xusid mudan in Salvini uusan u oggolaan markab ay leeyihiin Ciidanka Ilaalada Xeebaha Talyaaniga inuu soo galo dekedaha dalka bishii July ee lasoo dhaafay, iyadoo 141 muhaajir ay saarnaayeen.
Markii dambe, Salvini wuxuu u oggolaaday markabku inuu galo dekada “Augusta” ee Sicily, laakiin wuxuu diiday inay ka soo deggaan soogalootiga muddo lix maalmood ah, wuxuuna u oggolaaday oo keliya dadka u baahan daryeelka caafimaad.
Maxkamad ku taal Catania (Sicily) ayaa ku eedeysay Salvini “inuu si xun u adeegsaday awooda uuna xiray shaqsiyaad”, haddii eedeymahaas la caddeeyo wuxuu wajihi doonaa 15 sano oo xabsi ah.